U-Apple uhlaziya iMacBook eyi-intshi ezili-12 | IPhone iindaba
U-Apple uhlaziya iMacBook eyi-12-intshi: iprosesa entsha, i-RAM engaphezulu kunye nemibala emitsha
Xa iApple yazisa iMacBook entsha, sonke sasicinga ukuba iyakuba yeyokuqala kumgca omtsha weencwadana zeApple. Entsha MacBook eyi-intshi eyi-12 Yikhompyuter ekhanyayo, into elungileyo kakhulu ukuyihambisa kodwa hayi kangako ukuze isebenze nayo emadolweni. Kodwa eyona nto yaphikisayo kukungabikho kwamazibuko, kuba ibandakanya i-USB-C kuphela. Ingxaki ayikuko ukuba babheje kwisinxibelelanisi sexesha elizayo, kodwa babandakanya enye kuphela kwaye ababoneleli ngayo nayiphi na indlela yokuphucula eli candelo ngaphandle kokushiya imali abayigcinileyo.
Namhlanje, iApple ihlaziye iMacBook eyi-intshi eyi-12 kwaye yenze njalo ukuphucula izinto ezithile, ezinje ngeprosesa, esele iye I-XNUMX yeGen Intel Core M ii-core-clocked kwi-1.3GHz kunye ne-Turbo Bost isantya ukuya kwi-3.1GHz. Kwelinye icala, ikhadi lemizobo lale MacBook intsha yi-Intel HD Graphics 515, eqinisekisa isantya esikhulu, kodwa ekulindelweyo, ayonelanga ukusebenzisa iiglasi zeVR.
I-MacBook entsha eyi-intshi eyi-12 ifika
Ibhetri yenye inkalo ephucule kuyo kunemodeli yangaphambili. I-Apple iqinisekisa ukuba ukuzimela kwale nguqulo intsha kuya kubonelela Iiyure ezili-10 zokukhangela i-Wi-Fi kwaye malunga neeyure ezili-11 ngaphandle kweintanethi (into endingenakuphupha ngayo ngePC yam yangoku engeyo-Apple), enokuthi idlale iimuvi.
U-Apple wayefuna ukuthatha ithuba lokumilisela ikhompyuter yakhe entsha ekhanyayo ngombala ofanayo njenge-iPhone 6s, ebandakanya iRose Gold, Space Grey, Gold kunye neSilivere. IiMacBooks ezintsha ziyafumaneka nge LONTO kodwa, njengoko ubona, kukho into esilelayo. Babo amaxabiso aya kuba yi-1.449 Imodeli kunye ne-Intel Core m3, 256GB yokugcina kunye ne-8GB ye-RAM kunye ne- € 1.799 Imodeli ene-Intel Core m5 kunye ne-512GB yediski enzima ene-RAM efanayo. Asinakuthi zezona khompyuter zibiza ixabiso eliphantsi kwintengiso, kodwa umbuzo uyimfuneko: Ngaba uza kuyithenga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » U-Apple uhlaziya iMacBook eyi-12-intshi: iprosesa entsha, i-RAM engaphezulu kunye nemibala emitsha
I-Apple Car inokwenziwa nguMagna e-Austria
Iifowuni ze-WhatsApp zevidiyo ziqinisekisiwe ukuba ziyinyani, kodwa nini?